Iko kufunga kukuru: Ndeipi nyika yatichavaka mushure medambudziko re corona? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 6 April 2020	• 2 Comments
Murwere wepfungwa weSwitzerland Karl Jung akati, "Icho chinokupa hanya chiri kukura." Iye zvino unogona kubvunza kana iri iri mutemo wechisikirwo, nekuti unozviratidza sei chinhu chakadaro nesainzi? Isu tava kujaira kuteerera 'nyanzvi' uye isu zvakare tinofunga kuti kune ruzivo rwakawanda zvekuti zvinonetsa kusefa zvese izvo.
Asi pane chokwadi chakawanda mune zvinotaurwa naJung Zvino kana ini ndati kwauri, "Usafunga nezvekati." Unofungei nezvako? Ikati. Zvinobatsira kuziva mashandiro anoita uropi hwedu uye zvino yave nguva yekushandisa kugona kwayo kwechokwadi.
Zvino handingati unofanira kunditeerera. Iye zvino handichada kukuudza kuti ubatanidze saiti ino uye kudzima bepanhau rako kana TV, asi iwe unofanirwa kufunga kuti kufungidzira kwakaitwa uye saka unogona kufunga kuti kwakakosha. Kunyanya ikozvino.
Paunenge wagadzirira, ikozvino pane nzvimbo yakakosha iwe kwaunogona kuratidza mazano ako uye apo vamwe vanogona kupindura. Iyo inzvimbo iyo iwe yaunogona kupa ngwariro yako kune izvo zvaunoda kukura.
Handisi kuzokuudza kuti uverenge bhuku rangu kana kuverenga zvinyorwa pano pane saiti kutanga. Izvo zvinogoneka, zvinobvumidzwa uye zvinobatsira kana iwe ukatora chikamu kuti iwe unoziva mashandiro ekuona anoshanda uye kuti iwe unoziva mashandiro evashandi veIMB. Saka zvinobatsira kana iwe ukaona maitiro chaiwo sezvatinoona kuti akavakwa. Zviite.
Mubhuku ini ndinotsanangura kuti une simba rakawanda kupfuura raunofunga. Unogona kuita kuti izvozvi zviitike. Chii chinokupa hanya chiri kukura, Jung akadaro. Chii chinokupa iwe yekugadzira kutarisisa kunogadzira. Utachiona hahugone kurarama hwoga. Inoda sero yevaeni. Izvo zvakafanana zvinoenda kune zvese-zvinosanganisira hutachiona hutachiona zvinofamba pasi rino; ingave ine simba uye isingafungidzike. Tinogona kukunda iyi hutachiona mamiriro kubva kwatave kwakatanga kusika.
Kana iwe uchiziva kubva pazera rekutanga kuti une izvo izvo mavari mauri, kana iwe wakanzwa kwemakore kuti chimwe chinhu chinofanira kuchinja, kana iwe uri kumba ikozvino uye zvese zvakasiyana; chaizvo saka ndiyo nguva yekutanga iwo mavambo. Naizvozvo, pinda nyika mauri kusika iwe kubva mukuziva kwako uye zvino govana mazano ako. Ita yako sarudzo kutanga.
bhuku rako yako foramu
Maonero ezvokwadi zvichienderana nechokwadi chaiye
Mhedzisiro yevanyori, makuhwa, nhau dzemitambo, zvepabonde (nezvimwe) pamufananidzo wako kugadzirwa
Tags: cherechedza, corona dambudziko, coronavirus, Featured, Forum, anopa, inokura, mazano, je, diki, Karl, funga nezvazvo, Wat, nyika
jupasch akanyora kuti:
Chero zvazvingave, zviri pachena kuti chinangwa chei Bill Gates chakandiitira iyi 'Lockdown'…
Madzinza ese uye munhu wese akagara akagadziridzwa uye akasarudzika uye akarwadziswa pamusoro pezvizvarwa zviviri zvakapfuura nepfungwa yekuti hurumende inofanirwa kukuchengeta uye kuti hurumende iripo yekukuchengeta kubva kubeche kusvika paguva.
Chokwadi chekuti mapoka akakura kwazvo ave anovimba nechikafu chavo uye chinwiwa kuburikidza nerubatsiro / rubatsiro / kubvumirwa kana kuburikidza nebasa rehurumende chakasimedzawo kuvimba uku zvakanyanya muuropi hwedu.
Midhiya senge (semuenzaniso, asi kune zviuru zvemienzaniso) zvirongwa zvevatengi zviri kuramba zvichimanikidza kuti zvinhu zvisina kunyorwa zvakanaka nehurumende zvinofanirwa kutorwa nekugadziriswa nekuti hurumende inofanirwa kuronga zvese uye kutiitira zvese. Hurumende yedu inodiwa.
chechi yaimboita zvakafanana, asi izvo zvapera.
Yasvika nguva yekuti vanhu vazive kuti HAPANA PANE munhu kwauri uye kuti HAPANA PANE ipapo kuti uve nechokwadi chekuti HAPANA CHIMWE chaunogona kuwira pasi. Hurumende dziripo chete kune chinangwa chikuru chekupera, kushandira Mr. L mukutanga chirongwa chake, uye chero munhu chero ari millimeter pamusoro pevhu padanho achamushandira angave mukati kana pamwe asingazvizive.
Isu tinongova isu pachedu kuti tirere pasi uye izvo dzimwe nguva zvinogona kuoma zvakakwana.
Baba vangu vaizivawo, hapana chavaiziva nezvekurangana kukuru (kuti vataure) asi vagara vandikurudzira kuti hapazombofi paine munhu anozokubatsira kana kuti iwe unowira pasi, ucha gara uchifanira kuzviita wega.
Kana iwe ukaziva izvozvo uye iwe pakupedzisira ungazonzwa kuti ichokwadi mune ako capillaries, izvo zvinogonawo kukupa simba.
« Coronavirus covid-19 uye sainzi: Inopinda sei mumuviri wako uye unoitamisa sei?
Corona Dambudziko: Zvinogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu kuti ubve kunze kwekuvhara kunze kwekutanga kwekutsvaga uye maapps »
Kushanya kwakazara: 2.658.697
Kufanotaura: Hondo yevagari vemuUS, mhirizhonga muEurope, kuparara kweNATO uye kusimuka kweTurkey (ASSAM)
Martin Vrijland op Femke Halsema inoita kuratidzira pasina mvumo yepamutemo & yeboka kugadzirwa uye 1,5 m yemagariro ekudzora isingadzoreke
xdenhaag op Femke Halsema inoita kuratidzira pasina mvumo yepamutemo & yeboka kugadzirwa uye 1,5 m yemagariro ekudzora isingadzoreke
SalmonInClick op Kufanotaura: Hondo yevagari vemuUS, mhirizhonga muEurope, kuparara kweNATO uye kusimuka kweTurkey (ASSAM)
Future op Kufanotaura: Hondo yevagari vemuUS, mhirizhonga muEurope, kuparara kweNATO uye kusimuka kweTurkey (ASSAM)